Darajooyinka Gaarka ah iyo Astaamaha Gaarka ah - Ellicott Dredges
Darajooyinka Gaarka ah iyo Astaamaha Gaarka ah
Dredges Customer Dredges iyo Tilmaamo Gaar ah
Magaca sumadda 'Ellicott®' wuxuu sii wadaa inuu la wareego soo bandhigida injineernimo si gaar ah loo sameeyay iyo wax soo saarey, dhismooyin casriyeysan iyo astaamo. Mararka qaarkood kooxdeena injineerada hibada leh iyo shaqaalaha dukaanada u heellan ayaa ku farxay qaabeynta iyo soosaarida qaar ka mid ah qaababka caanka ah ee adduunka ugu quruxda badan oo leh astaamo u gaar ah qeexida macaamiisha saxda ah.
Laga soo bilaabo dredge si buuxda loo habeeyay ilaa heer farshaxaneed casri ah, si kasta oo ay u weynaato ama u tartanto howsha ay dhici karto, kooxdeena waxaa ka go'an soo saarista xalka ka sarreeya rajooyinka macaamilkeena. Iyada oo loo marayo shaqadeena ku saabsan daahfurnaanta caadooyinka iyo qalabka takhasuska ah, Injineerada Ellicott waxay kasbadeen in ka badan 20 shatiyadaha caalamiga ah ee hal-abuurka cusub ee la xiriira.
Magaca sumadda ayaa wali ku sii kordhinaya soo ifbixinta si gaar ah loo farsameeyay loona farsameeyay, qulqulaya qaab-dhismeedyo iyo astaamo. Mararka qaarkood kooxdeena injineerada hibada leh iyo shaqaalaha dukaanada u heellan ayaa ku farxay qaabeynta iyo soosaarida qaar ka mid ah qaababka caanka ah ee adduunka ugu quruxda badan oo leh astaamo u gaar ah qeexida macaamiisha saxda ah.
Dredges Customary waaweyn
Cabbirka siidaynta: 24 ″ - 36 ″ (610 mm x 914 mm)
Mashiinka ugu Weyn: 4,700 - 16,000 HP (3,470 - 11,931 kW)
Awoodda Quwada Xoogga: 850 - 3,000 HP
Qoto Dheerida Ugu Badan: 60 ′ - 100 ′ (18 - 30 m)
Gawaarida Naafada Whe Bucketwheel Dredges
Noocii ugu horreeyay ee loo qaabeeyey loona sharciyeeyay Ellicott® ee Wheel Dragon ™ Bucketwheel dredge ayaa la soo saaray 1976. Tan iyo markaas, Wheel Dragon red dredge wuxuu caan ku noqday howlaha macdanta ee adduunka. Ku darista qodista baaldiga baaldiga ah ee dhulkaaga ayaa kordhin doonta xoogga goynta iyo wax soo saarka guud. Haddii aad kordhinayso wax soo saarka hawlgalka macdanta ciidda ama macdanta adduunka ugu adag, macdanta "Wheel Dragon" waa xalkaaga. Beddelaadda 'Wheel Dragon' ™ wax ka beddelka qotodheer waxaa loo diyaarin karaa xulashada moodellada nooca loo yaqaan 'Ellicott Dragon® brand dredge'.
Qalabka qodista sare ee qalabka adag
• Heerarka soo kabashada aadka u sarreeya waxay ka dhigayaan heer
qodista codsiyada macdanta badan
Dredges Coastal Dragon®
Naqshadda xeebta ee loo yaqaan 'Ellicott®' ee Xeebta Dragon® ee xeebta ayaa ku habboon ka shaqeynta jawiga xeebta. Xeebta Dragon® Xeebta waxay leedahay qulqulo ikhtiyaar ikhtiyaari ah oo u oggolaanaya qoditaanka in lagu bilaabo hoosta gawaarida mashquulka ah oo sii wado hawlgalka inta lagu shaqeynayo marin biyood leh buundooyin badan. Kordhinta looxa waxay u oggolaaneysaa Xeebta Dragon® inay ka shaqeyso badaha iyada oo aan la saadaalin karin ama barar joogto ah. Naqshadeynta Xeebta Dragon® xeebta waxaa lagu dari karaa noocayaga 1170 Taxanaha ah ee loo yaqaan 'Dragon® dredge' iyo kor.
Kala Bixinta Korantada
Beddelka mashiinnada naaftada, Ellicott wuxuu kaloo bixiyaa qulqulo koronto. Qeexitaannadan waxaa koronto ahaan looga shaqeeyaa xeebta waxayna faa'iido u leeyihiin mashaariicda muddada-dheer la isticmaalo.
Maaddaama aysan jirin matoor naaftada, qulqulaha korantada ayaa ka kharash yar sidii loo daryeeli lahaa, iyo kharashaadka hawlgalka ee hooseeya sida caadiga ah waxay dejinayaan maalgashiga bilowga ah ee sare.
Wadista korantada waxaa loo bixiyaa sida ikhtiyaar u ah dhammaan cabirrada iyo noocyada cabbirrada ay soo saartay Ellicott.
Gawaarida Gawaarida Naafada ah
Xeebta Xeebta 'Dragonge Dredge'